माधव नेपाल पक्ष छिन्न-भिन्न हुँदै ! यस कारण गरिएन १२ भाईलाई कारवाही – UPDATE LINK
माधव नेपाल पक्ष छिन्न-भिन्न हुँदै ! यस कारण गरिएन १२ भाईलाई कारवाही
काठमाडौ । नेकपा एमाले विभाजन उन्मुख भइरहेको बेलामा दोस्रो तहका नेताहरु एकता कायम गर्न भन्दै वैठकमा जुटेका छन् । उनीहरुको बारम्बार वैठक भइरहेको छ । नेकपा एमालेमा पहिलो तहका मुख्य नेताहरु विभाजन तर्फ गइरहेका बेलामा दोस्रो तहका केही नेता अझै एकता जोगाउने अभियानमा लागेका हुन् ।
छलफलमा ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरु सहभागी छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुई तिर फर्किएका बेलामा दोस्रो तहका नेताले एकता जोगाउन प्रयास जारी राखेका हुन् ।
यसै क्रममा उनीहरूबीच याक एन्ड यति होटलमा सोमबार राति अबेरसम्म छलफल भएको छ। पार्टीमा एकता कायम गर्ने प्रयासअनुरूप दुई पक्षका दोस्रो तहका नेताबीच भेटवार्ता भएको माधव नेपाल पक्षका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पुष्टि गरेका छन् ।
उनले याक एण्ड यतीमा दोस्रो तहका केही नेताहरुबीच बैठक भएको जानकारी दिए । पार्टी एकता जोगाउन आफुहरु अन्तिम सम्म प्रयास जारी राख्ने उनले बताए । सोमबार रातिको भेटवार्तामा अध्यक्ष ओली पक्षबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवाली तथा नेपाल पक्षबाट नेता पाण्डेसहित घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट सहमागी भएका थिए।
एकताको प्रयास जारी राखेकै कारण मंगलवार एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले स्पष्टिकरण सोधिसकेका माधव नेपाल पक्षका १२ सांसदलाई कारवाहीको निर्णय गरेन । यसअघि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका मुख्य नेताहरुलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गरिसकेको छ । मंगलवारको बैठकले उनीहरुलाई कारवाही गर्ने अनुमान गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा पनि माधव पक्षले अन्तर्घात गरेको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए।
लुम्बिनी प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा एमालेका चन्द्रबहादुर खड्कालाई पराजित गर्दै कांग्रेसका दृगनारायण पाण्डेय निर्वाचित भएका थिए।
एमालेको पार्टीभित्र देखा परेको विवाद समाधानका लागि बनाइएको कार्यदल पुनर्गठन गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको नेता ज्ञवालीले बताएका छन् । त्यसको उपादेयता सकिएका कारण पुनर्गठनको कुरा उठेको उनको भनाई छ । उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा लागेका नेताहरुलाई पनि आफ्नो पार्टीको धारमा फर्काउने प्रयास अझै जारी रहेको बताएका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री ओली भने फरक उद्देश्यका साथ ति १२ भाईलाई तत्काल कारवाही नगर्ने निर्णयमा पुगेको एक नेताले बताए । ओली निकट नेताका अनुसार ओली पक्षले नेता नेपालसँग एकता गर्ने भन्दा पनि सो समूहमा रहेका प्रभावशाली नेताहरुलाई तान्न खोजिरहेको छ ।
‘अध्यक्ष ओली नेता नेपाल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीलाई पार्टीमा कुनै हालतमा नराख्ने तर सो समुहका प्रभावशाली नेताहरुलाई आफ्नो समुहमा तानेर माधव नेपाल पक्षलाई छिन्न भिन्न पार्ने योजनामा ओली लागेको बताइएको छ । ओलीको नजरमा माधव नेपाल समुहका ‘सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टसहितका केही प्रभावशाली नेता छन् ।
उनीहरुलाई एमालेमै राखेर जिम्मेवारी दिने योजनामा ओली छन् । ओली पक्षका एक नेताका अनुसार सोमबार राती भएको बैठकमा नेपाल पक्षबाट सहभागी भएका नेताहरूलाई ‘तपाईंहरू माधव नेपाललाई क्रस गरेर एमालेमै रहन सक्नु हुन्छ त’ भनेर सोधिएको थियो। त्यसको अर्थ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावलहरू अब एमालेमा रहँदैनन् वा उनीहरूलाई राख्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा ओली पक्ष पुगिसकेको छ।